Soo dejisan MyChat 5.17.0.3 Standard iyo Portable – Vessoft
Soo dejisan MyChat
MyChat – chat aad u fiican in ay ku shabakadda shirkadaha iyo internet-ka. software wuxuu bixiyaa fariimaha qoraalka ku haboon, sarrifka file, formatting text, looxaanta wararka abuurka, iwm MyChat u saamaxaaya in ay qarka u saaran server si aad u configurate nidaamka xuquuqda iyo tayadoodii chat ee baahida shakhsi ahaaneed. software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u qabtaan audio iyo video ah oo ku baaqay in tayo sare leh. MyChat isticmaalaa nooca Windows XP ee la xidhiidha oo ay hubisaa in ammaanka lagu kalsoonaan karo. software waxay leedahay interface Fikirka-out ah oo gubtay, khayraadka nidaamka yar.
Shaqo ee shabakadaha ee kakanaanta kala duwan
Audio iyo video calls
Dhiciyaan of chat ah
buugga xiriir haboon
heerka sare ee ammaanka
Comments on MyChat:
MyChat Software la xiriira:
English, Українська, Deutsch, Português... Trillian 5.6
English, Українська, Français, Español... TeamSpeak 3.0.19.4 Client iyo 3.0.13.4 Server